လိုအပ်ချက်များကိုပြောပြရန်စုံစမ်းရေးကိုပို့ပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစိတ်ကြိုက်လိမ့်မယ်. ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: 1 စီးပွားရေးအမျိုးအစားထုတ်လုပ်သူ2စံ: GB 5237-2008; EN755, စသည်တို့,3ထုတ်ကုန်စီးရီး: ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်စက်မှုပစ္စည်းများအတွက်လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို.4စျေးနှုန်း: Nanhai Aluminum Ingot စျေးနှုန်းအပေါ်အခြေခံသည်(http://www.lvdingjia.com/)…
လူမီနီယမ်ပြွန်အတွက်လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းစုံစမ်းမှုများကိုပေးပို့ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အားလိုအပ်ချက်များကိုပြောပြရန်အီးမေးလ်ပို့ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစိတ်ကြိုက်လိမ့်မယ်. လူမီနီယမ်ပြွန်သည်သံထည်မဟုတ်သောသတ္တုပြွန်တစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်သတ္တု tubular ပစ္စည်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
တံခါးများအတွက်လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်း၏နိဒါန်း & လိုအပ်ချက်များကိုပြောပြရန်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းကိုပေးပို့ပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစိတ်ကြိုက်လိမ့်မယ်. ChangYuan လူမီနီယမ်သည်တံခါးအားလုံးအမျိုးအစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် &ပင်လယ်ရပ်ခြားစျေးကွက်အတွက်ပြတင်းပေါက်လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို, ကြိတ်ဆုံကနေ anodizing ကိုလက်စသတ်, electrophoresis နှင့်…